ကံအကောင်းဆုံးလူသားများ ပဋ္ဌာန်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြသော ဓမ္မမိတ်ဆွေများ - Tameelay
ကျောက်ကပ်မှာ ကျောက်တည်နေကြောင်း ပြသလေ့ရှိတဲ့ လက္ခဏာများ
ဆယ်တန်း ၆ဘာသာဂုဏ်ထူးနဲ့အောင်ခဲ့တယ် “ဆရာဝန်ဘဝကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာလှည့်ကာ သာသနာပြုနေတဲ့ ဆရာလေး ဒေါ်ကမလဥာဏီ”
ဒီနှစ် ၁၃၈၀ ( ၂၀၁၈ ) ထဲမှာ သတိထားရမယ့် အမည်တွဲများ
ဒံပေါက် ၊ အုန်းနို. ၊ မျှစ်ချဉ် ၊ တညင်းသီး ၊ မကျီးသီး တို.အန္တရာယ်ကင်းအောင် စားနည်း
ကံအကောင်းဆုံးလူသားများ ပဋ္ဌာန်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြသော ဓမ္မမိတ်ဆွေများ
ဘုရား တရား သံဃာ, အထွေထွေဗဟုသုတ
(၃) ကောင်းကျိုးမပေးသေးလို့ ဆိုပြီးစိတ်ပျက်အားမငယ်ကြပါနဲ့။
အမှန်တကယ်တော့ ပဋ္ဌာန်းတရားဆိုသည်မှာ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမှ လေးအသင်္ချေနှင့်ကမ္ဘာတစ်သိန်းတို့၌
အမျိုးမျိုးသောပါရမီတို့ကို ဖြည့်ကျင့်ခဲ့ပြီး ဘုရားဖြစ်တော်မူ၍ သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးဖြင့် ထိုးထွင်းထင်ထင်သိမြင်တော်မူခဲ့သော ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးဖြစ်ပါသည်။
ထိုပဋ္ဌာန်းတရားတို့အား ယခုဓမ္မမိတ်ဆွေများ နာကြားကြရတယ်၊ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြရပါတယ်။ ထိုကုသိုလ်ထူးသည်ပင်အနန္တဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ နာကြားရဖို့၊ ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ဖို့ဆိုရာတွင်
မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားထားသည်မှာလူဖြစ်ဖို့အာတွက် သမုဒ္ဒရာထဲတွင်မျှောပါနေသော လှည်းထမ်းပိုးရဲ့အပေါက်နှင့်
အနှစ်တစ်ရာမှတစ်ခါပေါ်သော လိပ်ကန်းရဲ့ဦးခေါင်းတို့စွပ်မိနိုင်ခြင်းထက်ပင်ခက်ခဲ့သည်ဟု ဟောကြားထားလေသည်။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်က သတ္တဝါတို့၏သံသရာအစသည်များပြားလွန်းအားကြီး၍ အစပင်မမြင်နိုင်လောက်အောင်
ရှည်လျားလွန်းလှပါသည်ဟုဟောကြားထားလေသည်။ ဖြစ်လေရာဘဝများစွာတို့သာသနာနှင့်မကြုံခဲ့သော ဘဝများစွာရှိခဲ့ကြပေမည်။
ကမ္ဘာမှာလူဦးရေသန်း၉ထောင်ကျော်ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာအဓိကဘာသာကြီး ၄ ခုရှိပါတယ်။
ခရစ်ယာန်၊မူစလင်၊ဟိန္ဒူ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆိုပြီး ၄ခုထဲမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာက သန်း(၆၀၀)ကျော်ပဲရှိပါတယ်။
ထိုထဲမှာမှ ထေရဝါဒစစ်စစ်က သန်း(၁၆၀)လောက်ပဲရှိပါတော့တယ်။ သာသနာတော်သုံးရပ်လုံးရဲ့အဓိကတာဝန်ကိုယူထားရတာက မြန်မာတစ်နိုင်ငံပဲရှိပါတယ်။
တရားတော်များ ကျင့်ကြံ၊အားထုတ်၊ရွတ်ဖတ်ချင်သော်လည်း မကျမ္မာကြ။ ကျမ္မာသော်လည်း ခန္ဓာရဲ့ချွတ်ယွင်းချက်များရှိကြပြန်ပါတယ်။
ထိုမလွယ်တာတွေများစွာကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြသော ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သည်
ပဋ္ဌာန်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်သောသူများသည် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ဂုဏ်တော်များ၊ တန်ခိုးတော်များ၊
ဉာဏ်တော်များကို စိတ်မှာရည်သန်လျှက် စေတနာ၊ သဒ္ဒါတရားထက်သန်စွာဖြင့် ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြစေချင်ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ရခြင်းသည်ပင် ကုသိုလ်အနန္တရရှိနေကြပါပြီ။ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တို့ရဲ့စောင့်ရှောက်မှုကိုလည်းခံယူနေကြရပါတယ်။
ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပြီးချိန်၌ ငါဟာဘုရားရှင်ရဲ့ တန်ခိုးအရာလွန်ကြီးမားတဲ့ ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးကို ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခဲ့ရပြီ၊
အမွန်မြတ်ဆုံးသော ကုသိုလ်ထူးကို ပြုလုပ်ခဲ့ရပြီဟု စိတ်နှလုံးရွှင်လန်းပြီး ဝမ်းသာဂုဏ်ယူလိုက်ကြပါ။
အထက်မှာရေးခဲ့သလိုပဲ သံသရာကြီးကရှည်လျားလွန်းတာကြောင့် အကုသိုလ်တို့သည်မည်မျှလုပ်ခဲ့သည်ဆိုတာမသိနိုင်ကြပါ။
ထိုအကုသိုလ်များကို ပဋ္ဌာန်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်ရင်း ဝဋ်ကြွေးများ၊ မကောင်းသောအကုသိုလ်များ ချေဖျက်နေကြသည်ဟုမှတ်ယူကြပါ။
အနည်းငယ်မျှသောအကုသိုလ်တို့သည် ပဋ္ဌာန်းတန်ခိုးကြောင့် ပြေပျောက်ကြပါတယ်။ ကြီးမားတဲ့အကုသိုလ်တွေလည်း အနည်းငယ်မျှပေးဆပ်ရုံဖြင့် ပြေပျောက်ကြပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတောင်မှ ဘုရားအဖြစ်မရောက်ခင် ခြောက်နှစ်တိုင်တိုင် ဒုက္ကရစရိယာကျင့်၍ ဝဋ်ကြွေးတော်ဆပ်ခဲ့ရပါတယ်။
ဓမ္မမိတ်ဆွေများအတွက် နိဗ္ဗာန်အထိရောက်အောင်ကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်သောတရားတော်ကြီးဖြစ်ပါသည်။ တန်ဖိုးအရာဖြင့်ပိုင်းဖြတ်၍မရနိုင်ပါ။
အဆုံးစွန်သော မဂ် ဖိုလ် နိဗ္ဗာန်ရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းထိရရှိနိုင်ပြီး ကြီးမားလွန်းလှသည့်အကျိုးကျေးဇူးကြီးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်သော
တန်ခိုးအရာလွန်ကြီးမားသော ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီး ကို
မအိုခင်၊မနာခင်၊မသေခင်အချိန်လေးမှာ- တွေ့တုံး၊ကြုံတုံး၊ဆုံတုံးအချိန်လေးမှာ – ရွတ်ဖတ်ပူဇော် ကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်ကြတုံးမှာ-
ရွတ်ဖတ်ပူဇော် နာယူမှတ်သား သင်ယူ ကျင့်ကြံ အားထုတ် ပွားများကြပါလို့ မေတ္တာရှေ့ထား တိုက်တွန်းနိုးဆော်လိုက်ရပါတယ် ။
ဒီလိုဘဲ အနိုင်​ကျင့်​ခံရ​တော့မှာလား.. မသန်စွမ်းတဲ့ အမျိုးသမီးကို တဲထဲခေါ် စော်ကားပြီးမှ ဒီလိုလုပ်လို့ရပါသလား
ဒီလိုဘဲအနိုင်​ကျင့်​ခံရ​တော့မှာလား မွန်​ပြည်​နယ်​ ကျိက်​မ​ရောမြို့ အတ္ထရံမြိုသစ်​ရပ်​ကွက်​မှာ ၂၄၊၃၊၂၀၁၈ရက်​​နေ့ည ၇း၃၀နာရီ​လောက်​မှာ ဗွီဒီယ်ိုကြည့်​ပြီးအပြန်​မှာ ၄င်းရပ်​ကွက်​ အမှတ်​၊၅၅၊ကျန်​စစ်​သားလမ်း ​မေတ္တာကမဌာန်း​ကျောင်းအနီးမှာ​နေတဲ့ ဦးထွန်းမြင့်​+​ဒေါ်​အေး​မော်​တို့ရဲ့သမီး မ—-(၂၅) နှစ်​ (မသန်​စွမ်းအသိမှတ်​ပြု မှတ်​ပုံတင်​ကိုင်​​ဆောင်​ထားသူ)ကို တလမ်းတည်း​နေ ဦးသိန်း​ဆွေ+မ​အေးသန်း တို့ရဲ့ သား လွင်​မိုး(​ခေါ်)ဖိုးတုံးလုံး အသက်​(၁၉)နှစ်​က လူသူမရှိတဲ့ တဲတလုံးဆီဖျား​ယောင်း​သွေး​ဆောင်​​ခေါ်ယူသွား ပြီး တဲရဲ့​ရှေ့ကပြင်​​လေးမှာ …
တချို့က ကျွန်တော့်ကိုမေးထားကြတယ်..ကိုခါး ခင်ဗျ တောက်တက် ဝယ်ယူနေကြတာတွေရှိနေတော့ တောက်တက်ဟာ ဘယ်နေရာတွေ၌ အသုံးဝင်ပါသလဲတဲ့…? ဟုတ်ကဲ့ပါ…တောက်တက်ကို Some believe the Tokay Gecko can be used to help treat the HIV virus. … The …
(5) ရက်အတွင်းလုံးဝပျောက်တဲ့ ကြွက်နို့ဆေး
(5) ရက်အတွင်းလုံးဝပျောက်ပါသည် ဒီဆေးနည်းလေးကတော့ကျွန်မ မျက်မြင်ဆေးနည်းလေးဖြစ်တာကြောင့် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မမောင်လေးခြေထောက်မှာကြွက်နို့ပေါက်တာ သုံးလုံးထိဖြစ်လာပါရဲ့။ဆေးနည်းတွေစမ်းကြည့်ပေမဲ့မပျောက်ပါဘူး။ မုံထူးကျေးရွာက ကိုညိုမောင်ပြောပြတဲ့ဆေးနည်းနဲ့သုံးရက်ပဲကြာ ပါတယ် ကြွက်နို့လုံးဝပျောက်သွားပါတယ်။ Image may contain: 1 person ကိုယ်တိုင်ကြွက်နို့ပေါက်တဲ့မောင်လေးက စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့လိမ်းနည်းအဆင့်ဆင့်အပြင် ခြံထဲကဧကရာဇ်အပင် အမြစ်တို့ကိုပါ ဓာတ်ပုံရိုက်ပေး လို့ သေသေချာချာတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူ့ခြေထောက်မှာကြွက်နို့ကအမာရွတ်လောက်ပဲထင်ကျန်ခဲ့ပါတော့တယ်။ Image …
မြန်မာအိုင်ဒေါက ပိုးမီ ကိုရီးယားမှာ ခွဲစိတ်ပြုပြင်လိုက်သောအခါ.
ဘဝ မှာ မှန်မှန် ကန် ကန် နေထိုင် တတ်သော …
မိန်းကလေးတို့ရှောင်ရှားသင့်သော ယောက်ျား ၁၂ မျိုး
မြောက်ဥက္ကလာ ဆေးရုံကြီးကရင်ခွဲရုံမှာ သေလူတယောက်ဆီက လက်စွပ်ချွတ် မရလို့
ပက်စ်ပို့စ်လုပ်မည်ဆိုပါက ၃၅၀၀၀ သာယူခဲ့ပါ ဘာမှနားမယောင်ပါနဲ့
အထူးသတိထားကြပါ. . .
စနေသားသမီးများအတွက် တစ်နှစ်လုံးစာအတွက် ဟောစာတမ်းကြီး…
ေ​​ချွးနံ့ ကိုယ်​နံ့ နံခြင်း မရှိ၊၂၆ နှစ်​အတွင်း တစ်​ကြိမ်လှဲ​လျှောင်းအိပ်​စက်​ခြင်း မရှိ …